java.util.Date (jsp,servlet) - MYSTERY ZILLION
November 2014 edited November 2014 in Java
Date and Time ကို Refresh မလုပ်ပဲ Web Page မာ ပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ... :-/ တချို့ဟာတွေက refresh လုပ်ပေးမှ ရတာတွေပဲဖြစ်နေတယ်။ Time ကို Second ပါမြင်ရရင်ကောင်းမယ်
Web Page မှာ ပေါ်အောင် လုပ်ချင်တယ် ဆိုတော့ ပေါ်တာတော့ ပေါ်တာပေါ့နော် ဒါပေမယ့် စက္ကန်.လေးတွေပြောင်းတာတွေပါ ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော် ?? အခု ဒီ topic ကို JavaEE နဲ.ပါတ်သတ်တယ်လို. မြင်ပြီး ပြောရရင်တော့ အဓိပ္ပာယ် မရှိဘူး လို.ပဲ ပြောပါရစေ ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ Client <> Server Communication ဆိုတာကို နားမလည်သေးဘူးလို. ယူဆပါတယ်။
စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဆိုတာဘာကို ဆိုလိုတာလဲ ဆိုရင် User Interface အပိုင်းကို Java နဲ. လုပ်ချင်တယ်လို. ပြောသလိုဖြစ်နေလို.ပါ။ ကျွန်တော့်အတွေ.အကြုံအရပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ UI အပိုင်းအထိ လိုက်ပြီး Server နဲ. communication ရှိနေတဲ့ Framework ဆိုလို. Vaadin ဆိုတာပဲ ရှိသေးတယ်။
URL >> http://vaadin.com/
Thanked by2saturngod Wai_Yan_Phyoe